Ejypta: Maikel Nabil, bilaogera voalohany nogadraina hatramin’ny 25 Janoary 2011 · Global Voices teny Malagasy
Ejypta: Maikel Nabil, bilaogera voalohany nogadraina hatramin'ny 25 Janoary 2011
Voadika ny 18 Marsa 2019 4:14 GMT
Nitokona tsy nihinan-kanina nanomboka ny Alatsinainy 22 Aogositra i Maikel Nabil, bilaogera Ejiptiana voalohany nogadraina hatramin'ny nanombohan'ny revolisiona 25 Janoary. Nijanona tsy nisotro rano i Maikel tamin'ny 30 Aogositra. Nentina tany amin'ny hopitaly izy roa andro taorian'ny tsy fahatsiarovan-tena nahazo azy.
Nanaiky hisotro rano ihany izy saingy mbola tsy mety mihinana sakafo. Notsaraina teo anoloan'ny tribonaly miaramila i Maikel, izay manana aretim-po, 12 andro taorian'ny nisamborana azy tany an-tranony tamin'ny 28 martsa 2011, ary voampanga ho “naniratsira ny tafika sy nampiely vaovao diso mikendry hanohintohina ny filaminam-bahoaka.” Voasazy higadra telo taona am-ponja izy.
Migadra telo taona an-tranomaizina i Maikel noho ny blaoginy nosoratany tamin'ny volana Martsa izay mitondra ny lohateny hoe “Tsy tanana iray ny tafika sy ny vahoaka”, izay nanononany izay heveriny fa voalaza ho zavatra tsy mety ataon'ny tafika amin'ny vahoaka ao Ejipta. Nivoaka tao amin'ireo lahatsoratra an-gazety sy horonantsary hafa manohana ny fitakiany ny bilaoginy. Manana tantara momba ny fikatrohana antserasera sy hevitra manohitra sy indraindray halam-bahoaka i Maikel. Nanasongadina hetsika antserasera natombony tamin'ny taona 2009 izay manohitra ny famolavolana lalàna tsy maintsy ataon'ny tafika ao Ejipta ny tranonkalany www.maikelnabil.com . Amin'ny maha-olona mamaritra ny tenany ho “mpomba an'i Israely” sy “tsy mpino”, dia ahitana lahatsoratra maromaro izay tsy laitran'ny ankamaroan'ny vahoaka Ejyptiana manohitra an'i Israely, sy ireo mpandala ny nentin-drazana ara-pivavahana ihany koa ny tranonkalany. Tsy nahazoany mpanohana maro teo amin'ireo Ejiptiana ny heviny halam-bahoaka.
Izaho manokana dia tsy miombon-kevitra amin'ny ankamaroan'ny bilaogy na hevitra avy amin'i Maikel, saingy amin'ny maha-olona mpanohana mafy ny fahalalahan'ny hevitra sy ny fanehoan-kevitra ahy, dia hiaro hatramin'ny farany ny zony hanambara azy ireo aho. Ao amin'ny bokiko “Manaramaso ny aterineto ao amin'ny Tontolo Arabo” (Foibe Emirà ho an'ny Fikarohana sy Fianarana Stratejika, 2009), nanamafy aho fa na dia tsy manakana tranokala aza i Ejipta (bilaogin'i Maikel manontolo, anisan'izany ny lahatsoratra nahatonga ny fitsarana azy, izay mbola ao amin'ny aterineto), dia manenjika ireo bilaogera sy ireo mpikatroka antserasera hatrany kosa ny mpitandro filaminana mba hanorisory sy hampihorohoro azy ireo sy ny hafa. Talohan'ny 25 Janoary tao Ejipta izany. Nanantena izahay fa hiova ny zava-drehetra ankehitriny. Hatramin'ny nisamborana an'i Maikel, nanadihady mpikatroka antserasera sy mpanao gazety maromaro ny tafika, anisan'izany i Hossam el Hamalawy, Reem Magued, Adel Hammouda, Rasha Azab, ary Asmaa Mahfouz. Tsy nosamborina izy ireo. Nogadraina nandritra ny herinandro i Loai Nagati, mpikatroka ary navotsotra avy eo.
Hatramin'ny volana febroary, sivily Ejiptiana 11.879 no notsaraina na natao fanadihadiana teo anoloan'ny tribonaly miaramila.
Nanomboka niezaka nanao hetsika manohitra ny tribonaly miaramila ny vondrona mpikatroka. Ny vondrona “Tsy manaiky ny Tribonaly Miaramila ho an'ny Sivily” dia mitaky ny sivily rehetra mba hotsaraina manoloana ny fitsarana sivika ara-dalàna. Mangataka ihany koa ny vondrona mba ho avotsotra ireo efa nogadrain'ny tribonaly miaramila ary haverina hotsaraina eo anoloan'ny fitsarana sivily. Vao haingana ny vondrona no namolavola PSA (amin'ny teny Arabo), manasongadina ireo mety ho kandidà filoham-pirenena hiady amin'ny tribonaly miaramila ho an'ny sivily.